ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် | အန်းဒရွိုက်သည် APK ကိုဒေါင်းလုပ် (နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း)
ပင်မစာမျက်နှာ » အစ္စလာမ့် Apps ကပ » ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်
Android အတွက်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကို Android device များအတွက်အခမဲ့ကုရ်အာန် application ဖြစ်ပါတယ်။ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတနှစ်အောက်အများအပြား features တွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်တောင်းဆိုမှုများကိုပေးပို့ပါနှင့်သင့်ဆုတောင်းကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်!
- ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ Madani လိုက်နာပုံရိပ်တွေ။
- gapless အသံပြန်ဖွင့်
- Ayah bookmarking, မှတ်သားခြင်းနှင့်မျှဝေ
- 15 ကျော်အသံရွတ်ဆိုထောက်ခံမှု (အသံ toolbar ကိုရဖို့ရန်အဘို့အမျက်နှာပြင်ကိုထိပုတ်ပါ) မီးမောင်းထိုးပြအတူရရှိနိုင်ပါသည်။
- ညဥ့် mode ကို
- ဘာသာ / ပိုပြီးမကြာမီလာမယ့်အတူ 20 ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများကိုကျော်အတွက် tafsir ။
ကျနော်တို့ Android အတွက်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်က Android အတွက်အကောင်းဆုံးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်လျှောက်လွှာစေရန်သင့်အကြံပြုချက်များကြားနာဖို့ပွင့်လင်းကြသည်။
- အဓိက bugfixes
- သာ (အစား3မြန်မာနိုင်ငံ၌မကြာသေးမီက) ကိုနောက်ဆုံးစာမျက်နှာကိုပြသကာ option ကိုထည့်ပါ။
- nougat အပေါ် shortcuts တွေကို
- စာမကျြနှာပျေါတှငျ rub3 add
- ပိုမိုလွယ်ကူ bookmarks ကိုတင်သွင်းစေ setting တွင်တင်သွင်း option ကို
- နောက်ဆုံးအစာဖတ်ခြင်း mode ကိုသတိရနှင့်ကပြန်လာ
- localization နောက်ဆုံးသတင်းများ, ဘာဂ်
Khalid က PB Nasser says:
မတ်လ 9, 2014 မှာ 4: 45 ညနေ
က loading ရဲ့အချိန်ဘယ်လောက်စောင့်ဆိုင်းရန် ,? နည်းလမ်း (အလုံးစုံ Surah တင်) ။
မတ်လ 9, 2014 မှာ 4: 26 ညနေ
Assalaamu alaikum !, 🙂ငါ့ညီအစ်ကိုတို့ရန်ဤလျှောက်လွှာကိုဖန်တီးသောသူမွတ်စ်လင်ငါတက်ဘလက်အတွက်ဒီ application ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လိုသင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ ? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မ 1 Surah Enter အခါရလဒ်မတွေ့ရှိစာမျက်နှာဖြစ်ပါသည်ပါပဲ။ ငါအားလုံး Surah ၏တင်စောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်?
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 26, 2014 မှာ 9: 40 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2014 မှာ 6: 35 ညနေ
အကောင်းဆုံး hai Boss
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2014 မှာ 3: 44 ညနေ
ဒီကောင်းတဲ့ App ကိုဘို့သင့်ကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Sabitu Abdus says:
ဇန်နဝါရီလ 31, 2014 မှာ 10: 30 ညနေ
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်များစွာသောသငျသညျဆုချနှင့်ဤ laudable အလုပ်အားလုံးကိုသင့်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်၌သင်တို့ကိုကူညီနိုင်ပါစေ
ဇန်နဝါရီလ 30, 2014 မှာ 5: 29 ညနေ
ကိုယ့် EislamExplorer လောကကိုချစ်သောသူအကောင်းဆုံး android ဖုန်းနှင့် java ကုရ်အာန်ဆော့ဖ်ဝဲ, ဘာသာပြန်ချက်နှင့်ရွတ်ဆိုထားသော၏တရာနှင့်အတူဈ 10 qari ဟာ android quran နှင့်လည်း eislam ရှာဖွေသူနှင့်အဘို့သန့်ရှင်း quran သည် rukoo မှာ Chang က, မဆိုခန္ဓာကိုယ်ဈပေးလိုသည့်အသံဒေတာကိုရောမွှေပြီ မှာငါနှင့်အတူပါသူ့ကိုအခမဲ့အဆက်အသွယ် asifkn702@gmail.com
မိုဟာမက် javed says:
ဇန်နဝါရီလ 26, 2014 မှာ 3: 27 ညနေ
Abdulrahim Safi says:
ဇန်နဝါရီလ 23, 2014 မှာ 3: 51 ညနေ
သငျသညျ မှစ. ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဤမျှလောက်
ဇန်နဝါရီလ 16, 2014 မှာ 8: 24 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2013 မှာ 8: 48 ညနေ
Jazak-ပေ khair ပေသင် hidayah ချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ
Abdulssamad Anjal says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 12, 2013 မှာ 2: 35 ညနေ
Alhamdulillah ငါ့မိတ်ဆွေတစ် Al-quran app များကိုရှာဖွေနေဤလျှောက်လွှာကို i'am အဘို့ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤလျှောက်လွှာနှင့်အတူဈသူမ၏အတူကမျှဝေနိုင်ပါသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်ဤလျှောက်လွှာကိုဝေမျှဘို့သင့်ကိုဆုချပါလိမ့်မယ်
el tassi ouedraogo mohamady says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 12, 2013 မှာ 5: 03 နံနက်
နိုဝင်ဘာလ 26, 2013 မှာ 10: 20 ညနေ
Alhamdulillah အလွန်အသုံးဝင်သော app ကို
နိုဝင်ဘာလ 22, 2013 မှာ 4: 26 နံနက်
နိုဝင်ဘာလ 22, 2013 မှာ 4: 24 နံနက်
နိုဝင်ဘာလ 22, 2013 မှာ 4: 23 နံနက်
နိုဝင်ဘာလ 14, 2013 မှာ 1: 46 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 14, 2013 မှာ 1: 42 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 6, 2013 မှာ 8: 26 နံနက်
ok & ကျေးဇူးတင် ,,,,
baba Umar says:
နိုဝင်ဘာလ 5, 2013 မှာ 10: 34 နံနက်
Pls ငါကိုသုံးနိုင်သည်ဆိုအခြားလင့်များရှိသလော ဤသည်အလွန်တဦးတည်းအလုပ်လုပ်မဟုတ်ပါ
နိုဝင်ဘာလ 11, 2013 မှာ 4: 47 ညနေ
သို့သော် link ကိုဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
အာမက် Safuan Hulmat says:
နိုဝင်ဘာလ 4, 2013 မှာ 11: 04 နံနက်
ummah နှင့်အတူရှယ်ယာတစ်ခုကိုမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
Anas md hyd says:
နိုဝင်ဘာလ 1, 2013 မှာ 1: 55 နံနက်
Ahmed က Away says:
အောက်တိုဘာလ 20, 2013 မှာ 12: 37 ညနေ
၎င်း၏တစ်ဦးထိပ်တန်း app များကိုဎငါကကြိုက်တယ်
အောက်တိုဘာလ 12, 2013 မှာ 6: 40 ညနေ
ဒါကကောင်းသော app ကိုပါ! အပ်လုဒ်တင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !! 🙂
Mohamed အေ Gabbar says:
စက်တင်ဘာလ 29, 2013 မှာ 10: 55 ညနေ
Binta မိုဟာမက် says:
စက်တင်ဘာလ 23, 2013 မှာ 1: 43 နံနက်
ငါကမဆိုဘယ်မှာရွတ်ဆိုရန်သို့မဟုတ်မည်သည့်အချိန်တွင်မနားထောငျဖို့ရှိနိုင်ပါသည်ကိုယ်အဘို့ငါအသစ်ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပေမယ့်ငါကရဖို့အချိန်ရှိသည်ဟန်ဘယ်တော့မှပေမယ့်ဖြတ်ထိုးဉာဏ် cos ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်ကိုသင်ဆုချနိုင်ပါစေ။ Ameen
Ramdan Assidik says:
စက်တင်ဘာလ 14, 2013 မှာ 7: 10 နံနက်
ငါ Gan အတွက် jazakumullahu khoiron katsiro ကို download လုပ်ပါစေခြင်းငှါ
စက်တင်ဘာလ 2, 2013 မှာ 10: 32 နံနက်
သြဂုတ်လ 21, 2013 မှာ 7: 37 နံနက်
ကျေးဇူးရဲ့ bro ။
« Previous 1234နောက်တစ်ခု "